R & D Kugona - Weifang Naipute Gesi Genset Co, Ltd.
Chikwata chedu chave chichiita muR & D yemagetsi zvigadzirwa zvemagetsi kweanopfuura makore makumi matatu muChina inozivikanwa hombe mainjini ekugadzira emabhizinesi;
Muna 2000, akatungamira uye akapedzisa kutsvagisa nekusimudzira uye kushambadzira biogas jenareta seti, inozivikanwa anaerobic yekuvirisa chirongwa mune yekudyara yekudyara indasitiri;
Muna 2002, akatungamira uye akapedzisa dhizaini, kutumira uye kushanda kwechipfuwo 3MW biogas magetsi ekugadzira chirongwa;
Muna 2008. NPT yakasimbiswa uye yakawana huwandu hwemagetsi emagetsi gasi;
Parizvino, kupenya kwakajeka kwakaitwa, kwave nekugona kwakajeka mumunda wesimba gasi simba;
Kambani yeNPT ine mainjiniya mazhinji ane makore anopfuura makumi matatu anoshanda ruzivo mumunda weinjini gasi uye jenareta
R & D timu inogona kuita yakasarudzika chigadzirwa dhizaini uye mazano maererano nemushandisi zvinodikanwa;
Kukwikwidza simulation kuverenga;
Makiyi akakosha anogadzirwa ne 3D kudhinda, iyo inopfupisa zvakanyanya iyo R & D kutenderera;
Injini: simudza kuhwina-kuhwina kwakarongeka kudyidzana hukama nevepamusha vanozivikanwa mainjiniya vagadziri, kuitisa vakabatana kutsvagisa nekusimudzira, uye komisheni kugadzirwa Injini dzese dzinobva kumigodhi yekugadzira yevanogadzira enjini nekune dzimwe nyika vanozivikanwa vanogadzira;
Zvikamu zvakakosha: shandira pamwe nevazhinji nyanzvi dzekutsvagisa masangano, mayunivhesiti, epamba uye ekunze akakurumbira brand injini vagadziri kuti vafambirane yanhasi epamberi gasi injini tekinoroji, uye sarudza uye enzanisa akakosha zvikamu pasi rese;
Injini inotora iyo gasi musanganiswa system, control system uye kuvesa system yakazvimiririra yakagadzirirwa uye yakagadziriswa neNPT brand. Injini ine akasiyana siyana mashandiro akadai mutete kupisa, kupisa-simba simba, mweya-mafuta chiyero kudzora, kumhanya mutoro kutonga, kuzvidzora kwadzakabva uye kuzvidzidzira kudzidza.
Gesi jenareta seti ine akawanda mabasa senge otomatiki kutendeuka, grid yekubatanidza, yakafanana mashandiro, kutakura mutoro, otomatiki kutakura mutoro, nezvimwe.